Guy Rivo Randrianarisoa “Fahantrana hiadivana fa tsy olona…”
Tsy mahagaga raha tsy tonga mifidy intsony ny olona, hoy i Guy Rivo Randrianarisoa tao amin’ny tambajotran-tseraserany omaly. Tsy mahagaga, hoy izy, raha tsy mihaino na tsy mandray toromarika intsony ny vahoaka. Ny taona 2009 - 2020,
Raharaham-pirenena Efa mijery ny amin’ny herintaona ny firenena mikambana
Natomboka sahady ny dingana mikasika ny mety ho fifanarahana vaovao eo amin’i Madagasikara sy ny rafitry ny firenena mikambana na ny SNU amin’ny taona 2021 ka hatramin’ny 2023.
Ravalomanana sy Andriantsitohaina Miha mafy ny fifandonana
Tsy misy resaka politika mihitsy io, ary marina angamba ny tenin’i Filoha Ravalomanana hoe tsy mahay politika aho,
Patrick Raharimanana “Mampalahelo ahy ilay Filoha mitsena entana”
Nandinika ny sarin'ny Filoham-pirenena nitsena ireo fitaovana nafarana avy any ivelany entina hitsaboana marary dia lasa ny saiko, hoy ny filohan’ny antoko politika Vitantsika io, Patrick Raharimanana ary tena nalahelo azy aho. Navoaka tao anaty fiaramanidina ny entana,
Antoko Natiora “Ny fitondrana mihitsy no mitady korontana”
Mampalahelo ny vahoaka Malagasy satria fanina tanteraka ary tsy mahita ho sarangotina, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika Natiora, tarihin’ny filohany Mihari-Ni-Rencho.
Dinika politika andiany faha-8 Ho raisina ny soso-kevitry ny sehatra tsy miankina
Ao anatin’ny fanomanana hatrany ny andiany fahavalo amin’ilay dinika politika eto Madagasikara izay tohanan’ny vondrona eoropeanina dia anjaran’ireo sehatra
Porofo mitohoka amin’ny tenda sy tsy azo lavina izany ankehitriny. Tsy vitan’ny fitondrana irery ny fitantanana ity valan’aretina Coronavirus ity. Tsy hitondra na inona na inona io fihibohana manomboka amin’ny 12 ora tolakandro io, hoy izy, satria tsy zakan’ny olona intsony ny zava-misy ary arak’izao ahitanareo azy izao dia mandeha ihany ny olona manao ny fitadiavany isan’andro. Efa nandeha io fepetra io fa tsy nahavaha olana. Efa ela izahay no nilaza fa mila arotava miisa 25.000.000 ampitomboina 3, izany hoe, 90.000.000 any ho any isika. Io no tokony anaty kitapom-bolam-panjakana dia zaraina amin’ny Malagasy rehetra dia mba mahazo 3 avy. Io aloha no ady voalohany, hoy hatrany izy. Teo nisy vola 8 miliara ariary nolazaina fa namidy vatomamy sy maska ka aiza. Izany rehetra izany entina hilazana fa tsy voavahan’ny fitondrana ny olana fa tandrametaka no betsaka, hoy hatrany i Alain Andriamiseza. Tsy mino ny mpitondra intsony ny vahoaka satria tsy ny zavatra asain’ny vahoaka ataony no ataon’ny mpitondra fa izay tiany. Mety tsy taitra anio fa ho taitra rahampitso ny vahoaka fa tadidio, hoy hatrany ny tenany.